အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အစားအစာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သင်အစားအစာနှင့်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်. သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်အဘယ်သူသည်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခါတစ်ရံကူညီနေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဟုခေါ်သည်, စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို, သို့မဟုတ်ဧညျ့. ထက်ပိုပြီး 14 လူဦးရေသန်းအစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်, များစွာသောအလုပ်အကိုင်များသို့ရရန်လွယ်ကူများမှာ. အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစားရန်ထွက်သွားပျော်မွေ့သောကွောငျ့အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားလာနေသည်.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလက်ထောက် - အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလက်ထောက်စျေးကြီးစားသောက်ဆိုင်များကော်ဖီဆိုင်ကနေအရပ်တို့ကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတွက်ဖောက်သည်အစားအစာနှင့်အချိုရည်များကို ပြင်ဆင်. ဝတ်ပြု. သူတို့ကအစဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မီးဖိုချောင်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်.
စားသောက်ဆိုင်ထမင်းချက် - စားသောက်ဆိုင်ထမင်းချက်ကဖေးသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်အတွက်အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. သူတို့ဟာပါဝင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာမှပြည့်စုံအစားအစာချက်ပြုတ်ဖို့အရာရာလုပ်ပေး. ပိုကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ, သူတို့အသီးအပွနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားတာဝန်များကိုပြင်ဆင်နေနှင့်အတူအကြီးတန်းတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးကကူညီ.
စားပွဲထိုးသို့မဟုတ်စားပွဲထိုး - စားပွဲစောင့်ဆိုင်းမီနူးဖော်ပြပါဝငျသညျ, အမိန့်ကိုယူပြီး, နှင့်အစားအစာ်ထမ်းဆောင်. ဒါဟာလူထုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် likes သူအထွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်င်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ဆာဗာများအကြံပြုချက်များကိုခံယူအဖြစ်လစာ. ရှာတွေ့သည် ဘယ်လိုစားသောက်ဆိုင် server ကိုဖြစ်.
အသားရောင်းသူ - တစ်ဦးအမဲသတ်သမားစတိုးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များဘို့ပညာရှင်ပီသစွာအမဲသားကိုလျှော့ချ. သားသတ်သမားများကို ပြင်ဆင်., စျေးနှုန်း, နှင့်အမဲသားကိုဖော်ပြရန်. သူတို့ကလက်မှာတာဝန်များကိုနီးစပ်သူအာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်.
ထမင်းချက်ခေါင်း - ထမင်းချက်ခေါင်း တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထမင်းချက်ဘို့အခြားသောနာမဖြစ်ပါသည်. စားဖိုမှူးချက်ပြုတ်နည်းများအောက်ပါနှင့်ချက်ပြုတ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အသေးစိတျဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရှိရမည်. တချို့ကစားဖိုမှူးဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ကင်အစားအစာအတွက်အထူးပြု. pastry စားဖိုမှူးကိတ်မုန့်နှင့်အချိုပွဲအတွက်အထူးပြု. တစ်ဦးက sous စားဖိုမှူးအများအပြားတာဝန်များကိုနဲ့အလုပ်အမှုဆောင်စားဖိုမှူးနှင့်ကိုကူညီပေးနေအောက်မှာအလုပ်လုပ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.
Host ကသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်မ - ဟာ host သို့မဟုတ်အိမ်ရှင်မသံသယကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်နှုတ်ဆက်. အဆိုပါသူတို့ရဲ့စားပွဲမှဖောက်သည်ယူ, သူတို့ကိုတစ်ဦး menu ကိုပေးသည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုသက်သာခံစားရစေသည်. hosting entry-level အလုပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အလုပ်ရှင်များတစ်ဦးဖော်ရွေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံရှာနေပါလိမ့်မည်.
စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ - စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာတပြင်လုံးကိုစားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သေချာအရာရာချောချောမွေ့မွေ့ပြေးစေသည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကဝန်ထမ်းကြီးကြပ်, အမိန့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, တစ်ခါတစ်ရံဖောက်သည်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်နှင့်စျေးကွက်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကိုင်တွယ်. ရှာတွေ့သည် စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲr.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံ၏လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. တခါတရံတွင်အဆိုပါအလုပျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး hectic, တချို့ဖောက်သည်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း. ဖိအားအောက်မှာအေးမြတည်းခိုပြီးအပြုသဘောဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လူတို့အဘို့အသှေးကောငျးများမှာ. သငျသညျကျောင်းကိုန်းကျင်ကသင်၏အလုပ်အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နာရီပူဇော်, မိသားစု, နှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ. သင်လုပ်နိုင်သည် careeronestop.org မှာ Self-အကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုယူ အလုပ်သငျသညျကိုက်ညီလျှင်ကြည့်ဖို့.
လူအများစုဟာအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံရရှိ, အထူးသဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ, အောက်ခြေမှာစတင်များနှင့်တဖြည်းဖြည်း၎င်းတို့၏လမ်းကိုတက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်. အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်သောအရာကိုသင်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုမရှိဘဲအများအပြားအလုပ်အကိုင်များသို့ရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါကြောင့်သင်ကချက်ချင်းအလုပ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလုပ်သားများများအတွက်ဝယ်လိုအားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်များသောအားဖြင့်ရှိသောကြောင့်ထိုသို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ. သင်တို့မူကား, ချက်ပြုတ်ချစ်ကြလျှင်, တစ်ခုသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားသို့ရချင်ပါတယ်, သင်ပထမဦးဆုံးအခြို့သောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်အတှေ့အကွုံရရန်လိုအပ်မည်.
Entry-level အလုပ်အကိုင်များများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာဝန်ဆောင်မှုလက်ထောက်အဖြစ်, ပန်းကန်ဆေးစက်, နှင့်စားပွဲစောင့်ဆိုင်းနေ, အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါသည်, အများစုမှာအလုပ်ရှင်များက၎င်းတို့၏အသစ်သောဝန်ထမ်းများမှ On-The-အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးကိုပေးမည်. တစ်ဦးရရှိမှု အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာ သငျသညျအလုပျရကူညီပေးပါမည်. သင်တို့သည်လည်းကူညီပေးပါမည်အခြားသင်တန်းနှင့်အထောက်အထားများရနိုင်.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အတှကျကောငျးမှပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုလုံခြုံအစားအစာကိုင်တွယ်များအတွက်လက်မှတ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနားလည်ကြောင်းပြသထားတယ်နှင့်သင်လုံခြုံစွာအစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြကြောင်း. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ (ကယ်လီဖိုးနီးယား, အီလီနွိုက်, အရီဇိုးနား, အနောက်ဗာဂျီးနီးယား, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, နှင့်နယူးမက္ကဆီကို) အစားအစာကိုကိုင်တွယ်ဒီလေ့ကျင့်ရေးရှိသည်ဖို့အတှကျတရားပေတည်း.
သင်လိုအပ်လက်မှတ်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုများအတွက် ANSI အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကို ANSI-အသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဤအအသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်များကိုတစျဦးဖွစျသညျ ServSafe, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စားသောက်ဆိုင်အစည်းအရုံးကဖွင့်ထားတဲ့. သို့သော်များစွာသောအခြားအသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်များရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုလက်မှတ်များအတွက်အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတန်းကိုရှာပါ.
တချို့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခါတလေစားဖိုမှူးစားဖိုမှူးအချက်အပြုတ်သင်တန်းပေးခြင်းရရှိထားစဉ်တွင်, အခြားသူများကိုစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်သူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့. အတော်များများက Entry-level ကိုရာထူးနှင့်အတူစတင်နှင့်လှေကားတက်ရွှေ့ဖို့ကွိုးစားအားထု.
သငျသညျစားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, သငျသညျအခြို့သောအထောက်အထားများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ရရှိနိုင်အများအပြားနှစ်နှစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်းများရှိပါသည်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
စားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအွန်လိုင်းသင်ယူဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ်. အွန်လိုင်းကျောင်းများသင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ကူညီခြင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်. ဥပမာ, Coursera ကမ်းလှမ်းမှု အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ.
အချက်အပြုတ်ကျောင်းများတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးများနှင့်အခြားအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များများအတွက်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်း. သင်တစ်ဦးရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အချက်အပြုတ်သင်တန်းကျောင်းများ၏အွန်လိုင်း directory ကို.
ယောဘသည် Corps လုလင်တို့သည်နှင့်အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်အခမဲ့ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကမ်းလှမ်း 16 သို့ 24. သူတို့ကတစ်ဦးရှိ အချက်အပြုတ်အနုပညာ အစီအစဉ်.
သင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုသုံးပါ - ခပ်သိမ်းသောမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးနှင့်တကွသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ.
အွန်လိုင်းကြည့်ရှုလော့ - snagajob.com လူတွေကအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်ချိန်နာရီအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်တစ်ခုအလုပ်အကိုင် site ကိုဖြစ်ပါတယ်.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အနာဂတ် - သင့်ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်!
သငျသညျအစာကိုဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ချင်ပါတယ်? သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ကနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးရာအစားအစာ - သင်ကအစားအသောက်အထူးရှိသည် Do?
စားနပ်ရိက္ခာကုန်တင်ကားအစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မိုဘိုင်းမီးဖိုချောင်များမှာ. စားနပ်ရိက္ခာကုန်တင်ကားလောလောလတ်လတ်ပြုတ်အစားအစာအစေခံ, မကြာခဏတိုင်းရင်းသားဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ - သင့်အိမ်ကတိုင်းပြည်အနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာအမေရိကန်တွေမှအသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်ပါတယ်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအစားအစာကုန်တင်ကားများ၏အရေအတွက်ကြီးထွားလာ. သူတို့ဟာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အလွန်လူကြိုက်များ. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးထမင်းချက်သို့မဟုတ်အရသာအစားအစာချက်ပြုတ်ရေးသူကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသိလျှင်, ဒီအယူအဆအပေါ်ပူးပေါင်းကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးကအစားအစာကိုထရပ်ကားလည်းကောင်းတစ်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လိမ့်မယ်. ယင်းနှင့် ပတ်သက်. Read အမွှေးအကြိုင်မီးဖိုချောင် Incubator: ဒုက္ခသည်များအစားအစာထရပ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သင်တန်းပေး. ဘယ်လိုသင်ယူ တစ်အစားအစာထရပ်ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်.